शर्मा परिवारमा बज्रपात : १० घन्टाको फरकमा वावु आमाको मृत्यु !
Posted on January 10, 2019 by T NP
काठमाडौं, २६ पुस । नियतिको खेल पनि कस्तो अचम्मको छ । १० घन्टाको फरकमा आएर श्रीमान् श्रीमतीलाई नै टप्प टिपेर लग्यो अनि शर्मा परिवारमा पिंडा थुपारिदियो । यो घटनाले परिवार मात्रै होइन सिंगो गाउँ समाज नै भाव विह्वल बनेको छ ।
यो पत्याउनै नसकिने दुःखद अवस्था नयाँबानेश्वर निवासी शर्मा परिवारमा पुष २४ गते मंगलबार १० घण्टाको फरकमा परेको छ । यो परिवारमा एउटा लाश दाहसस्कार गरेर नसक्दै अर्को लाश परेको दुःखद क्षणमा मलामीले काँध सेलाउन नपाउँदै अर्को लाश बोक्नु परेको छ ।
नियमित जस्तै सोमबार साँझ ८५ बर्षिय रामगोविन्द शर्मा र उहाँका सपरिवार खाना खाएर सुतेका हुन् । एक्कासी मध्येरातमा रामगोविन्दलाई छातीमा अप्ठ्यारो भयो भने लगत्तै उहाँका छोराहरु महेश र उमेश शर्माले एभरेष्ट अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगी चिकित्सकले परिक्षण गर्नासाथै मृत घोषणा गरिदिए । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उहाँको अस्पताल पुग्नु अघि नै मृत्यु भैसकेको घोषणा गरिदिए ।
जीवनको अन्तिम क्षणसम्म कुनै ठूलो रोग नलागेको र सकृय जीवन जिउनुभएका रामगोविन्दको अकस्मात मृत्युको शोकमा डुबेकी उहाँकी ७१ बर्षिय धर्मपत्नी भगवती देबी शर्मा भावविवहल बन्दै हुनुहुन्थ्यो । पिताको पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार सकेर विहान सबेरै घर फर्किएका महेश र उमेश नुहाएर फर्किए । आमालाई पनि नुहाएर कपडा फेर्न लगाई निकै जाडो भएकाले उहाँलाई तातो बनाउँन खोज्दै थिए ।
अब जे हुनु भैहाल्यो भन्दै आमालाई सम्झाउँदै काजकिरीयाको दयारी गर्दै गरेका छोराहरुको ध्यान दमको औषधि खाँदै आएकी विरामी आमाको स्वास्थ्य अवस्था प्रति केन्द्रीत भयो । यसै बखत उहाँलाई अलि न्यानोमा राखेर कोरामा बस्न पुरोहितले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो । अकस्मात भगवतीदेबी शर्मालाई सास फेर्न गाह्रो भयो । साथैमा रहेका दुई छोरा र छेवैमा रहेकी बुहारी कान्ता र छोरी प्रतिमा अतालिन थाले ।
पुरोहित र आफन्तहरु अतालिदै तातो पानी तातो पानी भन्न थाले । छोरीले तातोपानी खुवाउँदै थिईन आमाको अवस्था अन्तिम भयो भन्दै आफन्तहरुले तुलसाको मोठमा के पुर्याएका थिए उहाँको इहलिला समाप्ती भयो । मलामीबाट भर्खर फर्किएर घरघर मात्र पुगेका आफन्त यो घटना सुन्दा आश्चयमा पर्दै नुहान ठीक्क पारेका कपडा लगाउँदै दगुर्दै शर्माको घरमा पुगे ।
१० घण्टाको फरकमा बाबु आमा दुबै गुमाउन पुगेका शर्मा परिवार र एउटै घरबाट २ वटा लाश बोक्न बाध्य मलामीहरु मात्र हैन टोल नै शोकमा डुबेको छ । यो घटनाबाट पिडित परिवार तथा आफन्त जनहरु यतिबेला निकै ठूलो पिडामा परेका छन् । माता पिताको शोक एकैपटक पर्दाको पिडामा डुबेका परिवारलाई बोलाउन र सम्झाउन आउँनेहरु सबैका आँखा रसाउँछन् र स्वर मन्द हुँदै जान्छ ।
‘बुबाको निधनपछि आमालाई अस्पतालमा लगेर बुबाको अनुहार देखाएदेखि नै आमा बरबराउन र टोलाउन थाल्नुभएको थियो, उहाँलाई निकै गहिरो चोट परेछ’—छोरा महेशले भने—‘बुबाको वियोग सहन सक्नुभएन र आमाले पनि हामीलाई छोडेर जानुभयो । ’
पाँच दशक अघि रामगोविन्द र भगवतीदेबी दार्जिलिंगमा विवाह बन्धनमा बाधिएर काठमाडौं आउँनुभएको र उहाँहरुको २ छोरा महेश र उमेश तथा २ छोरी प्रतिमा र पुष्पा हुनुहुन्छ । एकातिर दमको राग अर्कातिर पतिको वियोग र एक्लोपन सहन नसकेरै भगवतीदबीको मृत्यु भएको देख्ने सुन्नेहरुको ठम्याई छ ।
एकै दिनमा बुबा आमा गुमाएर पालै पालो पशुपति आर्यघाटमा हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गर्नुपर्दाको पिडा र बाबु आमा गुमाएर शोकमा डुब्दाको पिडाले शर्मा परिवारमा निकै ठूलो चोट परेको छ । समाजका बुढापाकहरु शर्मा परिवारलाई सम्झाउँदै भन्छन् धर्मात्मा रहेछन् एकैसाथ गए ।
काउली बुढी र फुलन्देकी आमा चर्चित माता ‘सबिता सरु आचार्य’ को घरमै ‘माया पानको पात’ भन्दै यसरी नाचे, गरे माताको घरको तारिफ (भिडियो सहित)
बिहेको भोली पल्टै २ हात र १ खुट्टा काटियो ! आफन्तले रुपालाई अर्कैसँग बिहे गरेर जा भन्छन् ! कृष्णका थामीएनन आशु: (अहिले सम्मकै मार्मिक हृदयविदारक भिडियो)